Faka i-Instagram Ngaphandle Kwekhodi Yokuqinisekisa Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Januwari 28, 2019 0 Comentarios 11259
Amakhodi wokuqinisekisa angaba yikhanda kuwe. Kusukela, kuyamangaza ukuthi le yinkinga kusabalele ezinhlelweni ezahlukahlukene. Futhi ingabe leyo inethiwekhi yezokuxhumana edumile Instagram, inalolu hlobo lwenkinga oluthinte abasebenzisi abaningi, ababona ukuthi i-akhawunti yabo ivinjwe kanjani ngaphandle kokukwazi ukwenza lutho. Kepha kahle kunezindlela ezimbili ezilula Ukuxazulula isimo sakho. Esokuqala ukungena Instagram ngaphandle kwekhodi yokuqinisekisa kanti okwesibili ukuphoqa ukufika kwekhodi. Ezimweni zombili umphumela uyefana. Kepha kubalulekile futhi ukuthi ukwazi lokho Amakhodi wokuqinisekisa awawona wonke amabi.
Iyini ikhodi yokuqinisekisa?
Amakhodi wokuqinisekisa yi amasu ezokuphepha ezisebenzisa amapulatifomu e-imeyili nabezindaba zenhlalo, ngokusebenzisa SMS ukuze Xhumanisa i-akhawunti yakho nenombolo yakho yocingo. Ngale ndlela, uma umuntu efuna ukufinyelela kuma-akhawunti akho, ngaphezu kokuba ne-password yakho (uma kungenzeka uyitholile) kufanele ube nefoni yakho esesandleni, uma kungenjalo ngeke ukwazi ukufinyelela kuyo. Kepha kwesinye isikhathi lezi amakhodi wokuqinisekisa, baba umqobo wokuba ne-Instagram yakho noma enye inethiwekhi yokuxhumana nomphakathi.
Kungani kunezinkinga ngamakhodi wokuqinisekisa ku-Insagram?
Izizathu zokuthi zenzeke kungenzeka ukuthi zibangezakhe indlela yokuphepha yesikhulumi se Instagram. Lokho kwesinye isikhathi kuhlobanisa i-imeyili yakho ne i-akhawunti ekhona noma iqondisa kabusha imininingwane oyingezile. Futhi, inkinga ibingahle ikhiqize ngokwakho, yethula indlela engalungile inombolo yakho yocingo. Ngemuva kwalokho, uzobe ufuna indlela yokufaka i-Instagram ngaphandle kwekhodi yokuqinisekisa. Kuzona zombili lezi zixazululo ziyafana.
Kufanelekile ukuthi uyazi, ukuthi amalungelo we-Instagram okuqinisekiswa nge-imeyili lapho umsebenzi uyasola nezinye izikhathi thumela amakhodi wokuqinisekisa Ukuthi mhlawumbe abafiki. Ukuxazulula le nkinga landela lezi zeluleko.
Qinisekisa ukuthi inombolo oyifakile ilungile, uma kunjalo, qiniseka ukuthi iyasebenza ukuze wamukele ikhodi yokuqinisekisa. Uma lokhu kungasebenzi, zama enye inombolo oyitholile Ukuze uthole lokhu, kufanele ushintshe inombolo onayo kweyakho I-akhawunti ye-Instagram. Kungcono ukuthi i-akhawunti yakho ivulwe kusuka ifoni ne-PC yale nqubo.
Bheka ifolda ogaxekile SMS, kungenzeka ukuthi ikhodi ikhona. Uma kungenjalo, zama ukusebenzisa amakhodi wesipele ngubani owamukelayo lapho Ngakha i-akhawunti ye-Instagram, oyothola ekucushweni kwakho. Uma lokhu kukusebenzela, ungakwenza faka i-Instagram Ayikho ikhodi yokuqinisekisa.
Cisha ucingo bese ushintsha indawo okuyo. Inkinga kungenzeka ukuthi lokhu iqondisa isiginali.
Uma akukho kulokhu okungenhla okusebenzayo, zama ukwazisa i-Instagram kusuka esikhungweni sosizo, ukuze bakwazi ukukunikeza isisombululo.
Kepha uma ufuna ukukulungisa ngezindlela zakho Bese uzama inketho elandelayo.
Izinyathelo zokuthola ikhodi yokuqinisekisa
Kulokhu kuzodingeka usebenzise ikhasi lewebhu ukuthola umyalezo I-SMS, shayela Thola i-SMS Online. Okuyikho, ngokuphelele imahhala futhi ayidingi ukubhaliswa. Uma ukungena ku-Instagram ngaphandle kwekhodi yokuqinisekisa akusiyona ikhambi. Le nqubo izokusiza, ukulandela lezi zinyathelo.
Into yokuqala ukufaka iwebhu ye Thola i-SMS Online. Uma ungaphakathi, uzobona uhlu izinombolo ezivela emazweni ahlukene futhi ngokulandelayo, imilayezo etholwe emahoreni e-24 edlule. Manje, cindezela umakhalekhukhwini onemiyalezo eminingi. Inethiwekhi izophakamisa ukuthi ukhethe inombolo enemiyalezo embalwa, kepha isebenzile naleyo eneminye eminingi. Uma kungasebenzi kuwe, zama enye inombolo yocingo, ngoba ingadakwa kuze kufike ikhasi lingavuselelwa.
Ngemuva kokuthi ukhethe, iya ekhasini lokwamukela imiyalezo, phezulu, uzobona inombolo yocingo. Kopisha kufaka phakathi uphawu "+"Uma usuqedile ukwenza lokhu, unamathisele ewindini elikubonisayo Instagram bese ucindezela "Thumela".
Lapho inombolo yocingo isithunyelwe, i-Intagram izoqhubeka thumela ikhodi yokuqinisekisa. Kufanele ubuye ekhasini lokwamukela imiyalezo bese uluvuselela.
Ngekhasi elibukeziwe ongalibona etafuleni elingezansi, imiyalezo yokugcina etholiwe. Into elandelayo ozoyenza ukukopisha ikhodi yokuqinisekisa i-Instagram ezobe ikuthumele yona, ozothola kuyo ikholomu ye Umlayezo. Umlayezo kufanele ube phakathi kokuqala. Ngokufanayo, qinisekisa ukuthi inombolo yekholomu Kusuka inombolo yiba i-69988.
Ukuqedela inqubo, unamathisela ikhodi oyikopile esinyathelweni esedlule, ekhasini lapho i-Instagram icele khona. Uma usuqedile, uzoba i-akhawunti yakho ye-Instagram eqinisekisiwe futhi uzokwazi ukuyifinyelela ngaphandle kwenkinga.
Ungase futhi ube nentshisekelo ngayo izingoma ezinhle kakhulu ze-Instagram.
1 Iyini ikhodi yokuqinisekisa?
2 Kungani kunezinkinga ngamakhodi wokuqinisekisa ku-Insagram?
3 Ngena ngemvume ku-Instagram ngaphandle kwekhodi yokuqinisekisa
4 Izinyathelo zokuthola ikhodi yokuqinisekisa
4.4 Kopisha ikhodi
4.5 Namathisela ikhodi